ikalishi kwezimpahla izimoto olude akuyona ezibheka engabizi. Imigwaqo iningi uthi lakhiwe izingxenye ezintathu: ojantshi, nemifula nemigwaqo. Ngo -European Union, ikhwalithi imigwaqo, ngenxa izici zezulu, belilokhu liphakeme. namaloli lemikhiqizo ezahlukene, kuhlanganise MAN TGA, wasebenzisa emizileni ahlukahlukene. Njengoba kwanda izinqubo kwezomnotho okwenzeka emhlabeni wonke la izindlela babe labhubhisa phezu amabanga amade. Namuhla ezokuthutha izimpahla kusukela eSpain kuya Finland kungaba ngezinsuku ezimbalwa.
Multi-ton amaloli bakwati kwetfula kancane uhambo olulodwa kuya inqwaba umthengi zamathani wezimpahla. Ngakho, izinto zokuthutha komgwaqo baba esiphumelela nakakhulu lapho iqhathaniswa nezinkulungwane umfula ngisho wesitimela. Yiqiniso, lezo zinguquko ezinkulu iphutha enkathini ende yesikhathi. Ibhizinisi kudingeka ukuhambisa omningi wezimpahla olude ngokushesha futhi ngaphandle nokulahlekelwa. izinkampani Car waqala ukukhiqizwa ephezulu amandla tractor, ezifana MAN TGA kanye nezinye izinhlobo. Lesi sithombe nje imelelwa weloli. Njengoba izimoto uthole esinamandla futhi okukhulu, kukhona umbuzo mayelana nekhwalithi imigwaqo. Izikhalazo enkulu babangela eYurophu eyayiyingxenye yeRussia.
Namuhla MAN iloli TGA, okuyinto libuyekeza ikakhulukazi omuhle, baye sekuyinsakavukela ku motorways yethu. Abashayeli Russian alikhuthalele ophilayo gumbi ku gumbi, olubonakaliswa kulesi sithombe. Iqiniso lokuthi nomkhiqizi kulo mshini awazange alinde isikhathi lapho Belarusians Russian futhi uyoveza imoto alesi sigaba. Njengoba izimo futhi imininingwane ye-operation izimoto sezulu yethu baziwa ukuba amaJalimane, ngamabomu wadala MAN TGA. Ngomqondo ongokomfanekiso, singasho ukuthi lokhu iloli esihlobene eduze ukuze Western naseMpumalanga Yurophu. Kule ndaba, kumelwe kuphawulwe eyodwa ubuhlakani. E-West eziphoqelelwe izidingo esiqinile kakhulu ukubunjwa amagesi qeda kanye nemingcele kuyayithinta imvelo.
Ngenxa yalezi zimo, i-MAN injini TGA yakhelwe izinga uphethiloli yasekhaya. Izidingo ze-standard Euro-3 abazenzi ngokuqinile, futhi akukho zithiyo ukuhamba kwi-European Union akukho. Njengoba izazi nabahlaziyi bathi kubalulekile ukuhlomisa cab ukuze umshayeli ukuwuzwa kahle ngangokunokwenzeka. Kodwa ngesikhathi esifanayo akufanele kube bayozela. Nakuba elele amamojuli abantu ababili emotweni anikezwa. Ukuze lokhu ungeze efrijini futhi eziningi nezinye izesekeli yasendlini ukuthi kudingeka umuntu e ohambo lwami olude. Sezitofu enamandla, futhi ebusika yesithwathwa musa kuthinte isimo gumbi. Kulokhu, lo ingilazi cishe misted.
Imoto sika injini MAN TGA inhlukano itusa ukuba ugcwalise kuphela uhlobo oluthile amafutha engine. Ikakhulukazi endaweni imodeli ezinjalo umshini, okuyinto eziboniswe isithombe sokugcina. Landela ngomkhondo isimo izingxenye ezinkulu neyesifunda ivumela electronic elawula uhlelo. Umshayeli kufanele njalo banake ukufundwa. Uhlelo yakhiwe ngendlela yokuthi enqanda ehlezi ngemuva isondo ukungasebenzi kungenzeka. Kulokhu, udinga basabela alamu bese uthatha izinyathelo ezithile. Njengoba kuyinto evamile kuzo zonke izimboni ngobuchwepheshe ohluphayo, kukhona imfundo kusuka umshayeli ukuhlonza nekugwema izinkinga ezingaba khona.
French iloli Renault Mascott ( "Renault Mascot"): Ukucaciswa, emabhokisini Izibuyekezo
"Hyundai HD 78": ezibekiweko lobuchwepheshe, incazelo, ukubuyekezwa
"Toyota" pick up umenzi Japanese, iloli okuthembekile ukukhanya
Indlela Khetha imoto kuhle izinwele
Gemini futhi Pisces: kwedivayisi iyatholakala!
Scooter amathathu nge amasondo akhazimula. Incazelo Nezibuyekezo
Le filimu "Futhi izibani ukuphuma": nabalingisi izindima
St John Abanesihe: Isithonjana, Hymn Nomthandazo
Indlela ukumpotopotoza indoda ukuze ujike ucansi ku kwalibaleka
Ngingaba Kiwi abakhulelwe kusaqalwa: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka